ट्रम्प बक्सिङका फ्यान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कुनैबेला बक्सिङ दुनियाँका शक्तिशाली व्यक्तिमध्ये पर्दथे । बक्सिङ सिन म्यागाजिनले तीन दशकअघि उनलाई बक्सिङ दुनियाँका दश शक्तिशाली व्यक्तिको सुचीमा राखेको थियो
एजेन्सी, ६ कात्तिक । के मरभूमिमा पनि नदी हुन्छ ? तर, थार मरमूमिमा नदीको अवशेष भेटिएको छ । एक लाख ७२ हजार वर्ष अघि थारमा नदी बग्ने गरेको तथ्य पत्ता
काठमाडौं, १५ असोज । नेपाली काँग्रेसका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले आफ्ना पिता गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्री पद त्याग्नुको खुलासा गरेका छन् । आज गान्धी जयन्तीका अवसरमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले राजधानीमा आयोजना
काठमाडौं, २४ भाद्र । आज १०७ औं वीपी जयन्ती । नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी वीपी जयन्ती मनाइँदैछ । नेपालमा
काठमाडौं, २ साउन । लौहपुरुष गणेशमान सिंह वाकपटुतामा कमजोर थिए । तर, उनको लेखन क्षमता उत्कृष्ट थियो । अंग्रेजी असाध्यै राम्रो लेख्थे । गणेशमान सिंहले सुन्दरीजल जेलमा बस्दा छोरा प्रकाशमान
समाचार विश्लेषण । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय भारतप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् । उनले आफ्नो सरकार ढाल्न खोजेको भन्दै भारतको आलोचना समेत गरे । भारतको राज्य
काठमाडौं, ३० असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले भन्दै आएको अयोध्या वास्तवमा नेपालको ठोरीमा भएको बताएका छन् । उनले भारतमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमणको समेत आरोप लगाए । हिजो बालुवाटारमा बोल्दै
काठमाडौं, ७ असार । आज जङ्गबहादुर राणाको जन्मदिन । वि.सं. १८६७ मा जङ्गबहादुर राणाको जन्म भएको थियो । बाल्यकालमा उनको नाम विरनरसिंह कुँवर थियो । गोर्खाको बोर्लाङमा जन्मिएका उनी राणा
काठमाडौं, २ असार । ४ असोज २०५३ मा नेपालको संसदको दुवै सदनले दुई तिहाईले भारतसँगको महाकाली सन्धी पारित गरेको थियो । सन्धीको मतदानमा अनुपस्थित हुने देखि विपक्षमा मतदान गर्ने समेत
काठमाडौं, २ असार । यो ठिक २५ वर्ष अघिको घटना हो । जतिबेला हालका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । काँग्रेसको सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला भएपनि देउवालाई घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, २ असार । भारतसँग २०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धी तत्कालिन नेकपा एमाले विभाजनको कारण थियो । सन्धीका पक्षधरमध्येका केपी शर्मा ओली हालका नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री छन् । माधवकुमार
काठमाडौं, २४ जेठ । साइकल चढ्न आजकल लाइसेन्स चाहिदैन । विना लाइसेन्स साइकल चढ्न पाइने भएपनि यसमा आकर्षण घटेको छ । मानिसहरु स्वचालित यातायातको साधन चलाउने बानी परिसकेको छ ।